Frp Pultrusion Lasitra, namolavola maty, Pultruded Profiles - Jinglong
FRP Pultrusion maty
FRP novolavolaina Profiles
FPR koronosy Die
FRP Insulation tohatra seza
Xinxiang Jinglong Composite Fitaovana Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 1995. Izany dia natokana ho an'ny orinasa R & D, famolavolana sy ny fanodinana ny FRP pultrusion lasitra, novolavolaina maty sy ny mombamomba pultruded. Ny orinasa manarona ny faritra mihoatra ny 5.000 metatra tora-droa, ary maherin'ny 30 karazana fitaovana milina isan-karazany, goavana CNC machining foibe, avo-marina tsara Fitotoana Vary milina, etc., ary koa ny fitaovana fitiliana tonga lafatra. Izany dia avo-teknolojia fiarovana ny tontolo iainana orinasa misahana manokana ny R & D, famokarana, ny varotra sy ny fanompoana ao FRP.
Product kalitao fanoloran-tena
· Ny vokatra orinasa mpamokatra entana, sy ny fitiliana dingana manana kalitao firaketana an-tsoratra sy ny antontan-kevitra fitiliana.
· Fa ny fizahan-toetra vokatra fampisehoana, miarahaba anareo tonga soa amin-kitsimpo isika hitsidika ny orinasa ho an'ny dingana rehetra sy ny fampisehoana feno maso. Taorian'ny vokatra hamafisina, dia ho anaty baoritra ary alefa.
Product Price fanoloran-tena
· Mba hiantohana ny ambony sy ny fampandrosoana azo itokisana ny vokatra, ny fifantenana ny rafitra an-toerana na iraisam-pirenena mampiasa marika toetra vokatra.
· Eo ambany ihany fepetra mifaninana, ny orinasa dia hanome anao ny tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra fampihenana ny vidiny tsy ara-teknika fanatanterahana ny vokatra sy fanovana tapaky ny vokatra.
Delivery fotoana fanoloran-tena
· Araka izay azo atao araka ny fepetra takiana mpanjifa, raha misy fepetra manokana, ary mila ho vita mialoha, indrindra ny orinasa afaka handamina ny famokarana sy ny fametrahana, ary miezaka ny hihaona ilain'ny mpanjifa.
· Service-pinoany: fifadian-kanina, fanapahan-kevitra, marina tsara, ary voahevitra tsara.
· Service tanjona: Service toetra mandresy mpanjifa fahafaham-po.
· Service fitsipika: raha misy toetra ara-dalàna na ny fitarainana avy amin'ny mpanjifa, ny orinasa dia mifandray amin'ny ara-potoana araka ny tokony ho fomba sy mitana ny fitsipiky ny mpanjifa voalohany.
Fiberglass Rectangular Tube, Miendrika Flat Profiles, Customized Frp Gutter Cover Plate, Bolt fiforonana Machince, Frp Pultrusion maty, SMC koronosy Die,